वातावरणका विषयमा के सिकाउछ लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयले ??
मंगल, असार २४, २०७६
विद्यालय, शब्दमा जुन गरिमा र शिक्षक शिक्षिकामा मा जुन सम्मान मनैदेखि प्राप्त हुन्छ त्यसको अर्थ हो त्यो संस्था र पात्रले सकारात्मक सोच र संस्कार सिकाउछ । तर अर्जुनधारा नगरपालिकाको वडा नं ६ मा रहेको लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयले पाठ्यक्रम त पढाउला तर विद्यालय परिसरको वातावरण हेर्दा जो कोहिलाई पनि मनमा प्रश्न उठ्छ, आखिर बिद्यालयले के पढाउछ ?
बिद्यालय परिसरमा कागज तथा प्लास्टिकका फोहरका थुप्राको थुम्का बनेका छन् । नयाँ कुरा सिक्ने विद्यालयका चौरमा फोहरका थुप्रा देख्दा विद्यार्थी र अभिभावकले के सिक्ने ? झापाका सफाइ अभियन्ता विष्णु आचार्यले विद्यालयको फोहर व्यवस्थापनले पीडाबोध गराएको बताउनुभयो । विद्यालयको कम्पाउण्डमा पर्खाल तथा डस्टविन भएपनि सहि रुपमा फोहर व्यवस्थापन नगरेको उहाँले बताउनुभयो ।
धेरै मात्रामा कागज रहेको र त्यसलाई पूर्न प्रयोगका लागि खासै ईच्छा देखाएको छैन । विद्यार्थीले खाजाका लागि ल्याउने चाउचाउ तथा बिस्कुटका
खोल यत्रतत्र फ्यालिनुले पनि विद्यालयले प्रदान व्यवहारिक शिक्षामा प्रश्न उठाएको छ ।
फोहरमैला व्यवस्थापनका सन्र्दभमा ईको समाचारले संवाद गर्न खोज्दा विद्यालयका प्रधानाध्यापक विरेन्द्र प्रसाद गुप्ताले बैठकमा व्यस्त रहेको र केहि बेरमा सम्पर्क गर्ने जानकारी गराउनु भएको छ । सभ्य नागरिक निर्माणका लागि राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा गरेको लगानीले संस्कार र चेतना सिकाउन नसके समग्र शिक्षा क्षेत्रको लगानीमा प्रश्न उठ्ने अभियन्ताले बताएका छन् । मुलुकभर सफाइ अभियान चलिरहदा शिक्षाको मन्दिर रहेको विद्यालय परिसरको दुरावस्थाले अभियानको उचाइ र प्रभावलाई अझै गति दिनुपर्ने देखिएको छ ।
तस्बिर: विष्णु आचार्य
स्वयम्भुमा बढे पर्यटक
कंलकी चावहिल सडकखण्ड विस्तारकालागि रुख कटानी शुरु
शुभ विजया दशमी, सबैमा वातावरण संरक्षणको दायित्व बोध होस् ।
PM Modi is going to declare India ODF